December 2020 - Online Hartha
ဘုရားစေတီများမှာ ထားရှိသော နေ့သင့်နံသင့် ဘုရားများနှင့် ဓာတ်ခန်း ၊နတ်ခန်းများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အယူအဆမဟုတ်ကြောင်း ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ ရှင်းလင်းမိန့်ကြားချက်များ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ မြန်မာလူမျိုး တွေ လက်ခံပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာရာတိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမ မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့ မသက်ဆိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဥပမာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ဘိုးမင်းခေါင် အရုပ်ကြီး တင်ထားတာတို့ ဝိဇ္ဇာဓိုရ်ဘုရားတို့ ကန်တော့ပွဲတွေတင်ထားတာတို့ ဒါတွေက့ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ မဆိုင်တာကို မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောတတ်ရမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆမဟုတ်တာတွေ ရွှေတိဂုံ ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ တွေ့တယ်။ရိုးရိုးဘုရားရှေ့မှာ လူမစည်ဘူး ဓာတ်ခန်းနတ်ခန်း တွေရှေ့မှာ လူစည်တယ်။ပြီးတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ အစဉ်အလာ စွဲလမ်းမှု တွေနဲ့ လူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ နေ့သင့်နံသင့် ဘုရားတွေမှာ ရေတွေလောင်းနေကြတာ မွန်းနေအောင်လောင်းတာ။ကိုယ်ချင်းမစာလို့ ဆောင်းရာသီလဲ ပုံးတွေနဲ့ ခပ်လောင်းတာ။ … Read more
December 30, 2020 by Online Hartha
သတိ…ဆိုတာ ပိုတယ် မရှိပါဘူး အခုရက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူး အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြေအောက်မှာနေတဲ့ သတ္တဝါ တွေတော်တော်များများ ထွက်လာတာကို သတင်းတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ် များသောအားဖြင့် စပါးအုန်းမြွေကြီးတွေပါ တောထဲတို့ မြေကြီးထဲတို့ နေတတ်တဲ့ ကောင်တွေပါ ကျန်တော်တို့ သတိထားရမဲ့ အချက်က ငလျင်အကြီးတွေပါ အဲ့လို သတ္တဝါတွေထွက်လာတဲ့ ဒေသတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြော တစ်လျောက်က ဒေသတွေချည်းပါပဲ စစ်ကိုင်း ပြတ်ရွေ့ကြောက စစ်ကိုင်းက စပီး ပဲခူး တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကို ဆင်းသွားတာပါ မြွေတွေတော်တော်များများက ငလျင်ခန့်မှန်း တဲ့ နေရာမှာ အတော်ဆုံးလို့ပြောရပါတယ် အချိန်ပြည့်နီးပါး မြေကြီးနဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့ သတ္တဝါတွေပါ သူတို့က ငလျင်မတိုင်မီ ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာက လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းအပြောင်းအလဲတွေကိုကောင်းကောင်းထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ် နောက်တစ်ချက်က ကျောက်တုန်းဖိအားတွေ ပြောင်းလဲလာရင်လည်း … Read more
ငရဲ မကွောကျသော မွနျမာလူမြိုးမြား
မြန်မာ အများစု မုန့်ဟင်းခါး အရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်.. မုန့်ဖတ်ကို မုန့်ဟင်းခါး ရောင်သူကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်တာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်.. ရန်ကုန်မှာဆို မင်းလမ်း ရခိုင်မုန့်တီမှာ ကိုယ်တိုင်မုန့်ဖတ်လုပ်တာကို အများမြင်သာအောင် အသားပေး ပြထားပါတယ်.. အလွန်အားကျစရာပါ.. ပုံမှန်ဆို မုန့်ဖတ်ကို ညဦးပိုင်း စလုပ်ကြပါတယ်.. နံနက်အစော ဆိုင်တွေ ပို့ချိန်ဆို အချဉ် အနံ စရပါပြီ.. အနံက နှစ်လိုဘွယ် ရှိပါတယ်.. ရောင်းမကုန်ရင် ညနေပိုင်းဆို အချဉ်များလာပြီး ပျက်ဆီးတာကို ကာကွယ်ဘို့ ဖော်မလင်ကို စသုံးလာပါတယ်.. သူတို့သတိမထားတာက နေ့စဉ် ကိုင်တွယ် နမ်းရှုံနေရင်ကို သူမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်တော့မှာပါ..ဖော်မလင်ပါတဲ့မုံဖတ်က သိသာပါတယ်.. မုန့်ဟင်းခါး မစားခင် မုံဖတ်ကို ယူပြီး အနံရှုကြည့်ပါ.. ပုပ်အယ်အယ် အနံကြီး ထွက်နေပါတယ်.. အဲဒါကို … Read more
လှေခါးအဆံ တပ်ဆင်ခြင်း သိကောင်းစရာများ ရှေးကျမ်းဆရာတို့သည် ​စုံမ နှစ်ခုလုံး တပ်​​ကောင်း၏ဟုဆိုသည်​ လက်သမား ကျမ်းဆရာတို့က မကိုသာ တပ်စေပါတယ်​။ လက်သမား ဆရာကြီးများမှာ စုံတပ်သည်လည်းရှိတယ်​ မတပ်သည်လည်း ရှိပါတယ်​။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်​ပထမအထစ်​မှ **လာဘံ သုခံ မရဏံ **လာဘ သုခ မရဏ တွက်ယူကာ မရဏံ မရဏ ကို ​ရှောင်ပါတယ်… ပ ထစ်က လာဘ ဒု ထစ်က သုခ တ ထစ်က မရဏ လာဘ က လာတ်လာဘ ပေါများခြင်း သုခ က ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း မရဏ က ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ ။ လာဘ – ၁ထစ် ၊ ၄ ထစ်၊ … Read more
အလွန်ထူးခြားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဧည့်ခံပွဲ
အလွန်ထူးခြားတဲ့ သူရဲကောင်း ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဧည့်ခံပွဲ နာရေးဆိုလျှင် အများကမင်္ဂလာ မရှိဘူး။ ရှောင်ရင်း၊ ရွံ့ရှာစရာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြတယ်။ ကြောက်လန့်စရာဟုထင်မြင်ကြပြီးဝေးဝေးပြေးကြပြန်တယ်။အမှန်တော့ ဒါတွေကိုမေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ထားပြီး ကျော်လွှားနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ “သုခအာဟာရ စားသောက်ဆိုင်” ၌ နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီမှ (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မောင်ဇင်ဖြိုးအောင်နှင့် မထက်ထက်ထွေးတို့၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ရှိ လူကြီးများမှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ မောင်ဇင်ဖြိုးအောင်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ မော်တော်ယာဉ်ဋ္ဌာန၌ လုပ်ကိုင် ပေးဆပ်လျှက်ရှိပြီး မထက်ထက်ထွေးသည်လည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏သန့်ရှင်းရေးတာဝန် ကို ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်နေသူဖြစ်သည် မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးပြီးချင်းမွန်းလွဲ (၃း၃၀) နာရီအချိန်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေဇလမ်းရှိ … Read more
အိမျပျေါမှာ အလောငျးပွငျ အိမျရှေ့ မှာ မင်ျဂလာဆောငျမဏ်ဍပျဆငျ
14/12/2017 ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက်မှာ သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။ နောက်15/12/2017နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။ တစ်ဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တစ်ဖက်ကလည်း တစ်သက်မှ တစ်မင်္ဂလာ။ အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင် အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။ သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။ Credit:Nyo Chaw Unicode Version 14/12/2017 ညပိုငျး ၁၀ နာရီလောကျမှာ သတို့သမီးလောငျးရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယျ။ နောကျ15/12/2017နမေ့နကျ သမီးက မင်ျဂလာဆောငျတယျ/ဝမျးနဲစှာပေါ့။ တဈဖကျကလညျး ဖအနေ့ာရေး။တဈဖကျကလညျး တဈသကျမှ တဈမင်ျဂလာ။ အဲ့သူတို့အမြိုးတှရေဲ့ ဝိုငျးပွီးဆုံးဖွတျလိုကျတာကတော့ အိမျပျေါမှာ အလောငျးပွငျ အိမျရှေ့ … Read more
ဘဝတူ ဝဒေနာခံစားနရေတဲ့သူတှေ သိအောငျ မြှဝပေေးစမျးပါဟယျဆိုတဲ့ ဒူးနာ အမွနျပြောကျဆေးနညျးလေး
ဒူးနာအမြန်ပျောက်ဆေးနည်းလေးမျှဝေဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဘူးရွက်အရင့် ၃ရွက်။ ပြဒါး မြေပဲစေ့ ၁ စေ့ခန့်။ ရှောက်ရည် လစ်ပိုပုလင်း လက်တစ်လုံးခန့်။ ဆေးဖေါ်စပ်နည်းကတော့ ဘူးရွက်၃ရွက်ကိုထောင်း၍ သတ္တုရည်ညှစ်ယူပါ။ ပြီးလျင်ပြဒါး၊ရှောက်ရည်တို့နှင့်ရောပါ။ ဖေါ်ပြထားသောပမာဏသည် လစ်ပိုပုလင်းတစ်ပုလင်းစာဖြစ်ပါသည်။ ဘူးရွက်သတ္တုရည်ထောင်းရာတွင်ရေကိုချိန်ဆထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒူးကိုမကြာခနလူးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏” ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်း”လေး။ စာအုပ်ထဲမှတ်ထားတာ၁၀နှစ်ကျော်ပြီ။တမနက် အိပ်ယာထဒူးကတော်တော်နာနေတာ အထိုင်အထအကွေးအဆန့်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ဘူး။ ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ ဒါနဲ့မှတ်ထားတဲ့ဆေးမြီးတို(ဆေးနည်းတို)မှတ်စုစာအုပ်လေးသတိရလို့ လှန်လှောကြည့်မိတော့ သာမညဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆေးနည်းလေးသွားတွေ့တယ်။ လိုအပ်တဲ့အမယ်၃မျိုးရအောင်ရှာပြီး ဆေးညွှန်းအတိုင်းလိမ်းကြည့်လိုက်တာ အခု၂ရက်ဘဲလိမ်းရသေးတယ်ကောင်းသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဘဝတူဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေသိအောင်မျှဝေပေးစမ်းပါဟယ်”။ ဒေါ်သန်းစိန်(အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း၊မြို့နယ်သမဦးစီးဌာန၊လှည်းကူး)မှအားရဝမ်းသာပြောလာပါသည်။ လက်ထဲတွင်လဲ နောက်ထပ်ဆေးတဖုံစာအတွက်ဆေးအမယ်၃မျိုးကိုတွေ့ရသဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်၍ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ Unicode Version ဒူးနာအမွနျပြောကျဆေးနညျးလေးမြှဝဖေျေါပွပေးလိုကျပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ ဘူးရှကျအရငျ့ ၃ရှကျ။ ပွဒါး မွပေဲစေ့ ၁ စခေ့နျ့။ ရှောကျရညျ လဈပိုပုလငျး လကျတဈလုံးခနျ့။ ဆေးဖျေါစပျနညျးကတော့ ဘူးရှကျ၃ရှကျကိုထောငျး၍ သတ်တုရညျညှဈယူပါ။ ပွီးလငျြပွဒါး၊ရှောကျရညျတို့နှငျ့ရောပါ။ ဖျေါပွထားသောပမာဏသညျ လဈပိုပုလငျးတဈပုလငျးစာဖွဈပါသညျ။ ဘူးရှကျသတ်တုရညျထောငျးရာတှငျရကေိုခြိနျဆထညျ့ရနျဖွဈပါသညျ။ … Read more
မြန်မာလဆန်းရက်တွေမှာ ရှောက်ရွက်ကို စားပေးသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
အိမ်ကြီးတော့ ​လောင်စာ၊ ​ကျောင်းကြီးတော့ သံသရာ ” တဲ့ အဓိပ္ပါယ်
အိမ်ကြီး​တော့ ​လောင်စာ၊ ​ကျောင်းကြီး​တော့ သံသရာ ” မြန်မာ့ရိုးရာ အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံတစ်ခု။ ဒီစကားပုံရဲ့ ရှင်းလင်းချက်​လေးမှာ​တော့….. ” အိမ်ကြီးကြီး​ဆောက်ခြင်းဟာ ​လောင်စာအတွက် အ​ထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ ​ဘုန်းကြီး​ကျောင်းကြီးကြီး ​ ဆောက်လုပ်ခြင်းဟာ သံသရာလွတ်​မြောက်ခြင်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လောင်စာအတွက် အ​ထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့၊ လူ​နေမှုဘဝ လုံခြုံအာမခံနိုင်ဖို့ အိမ်​ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်း အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့် အ​သေးအမွှား​လေးက စတင်ပါရဲ့။ ဒါ​ကြောင့် ​တိုက်ကြီးတာကြီး အိမ်ကြီး​တွေ တည်​ဆောက်လိုတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ သံသရာအကျိုး​​ မျှော်ကိုးပြီး ​ကျောင်းကန်ဘုရား​တွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုတဲ့အခါဖြစ်​စေ စေတနာပါပါ လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ…။ Unicode Version အိမျကွီး​တော့ ​လောငျစာ၊ ​ကြောငျးကွီး​တော့ သံသရာ ” မွနျမာ့ရိုးရာ အိမျနဲ့ပတျသကျတဲ့ စကားပုံတဈခု။ ဒီစကားပုံရဲ့ ရှငျးလငျးခကျြ​လေးမှာ​တော့….. ” အိမျကွီးကွီး​ဆောကျခွငျးဟာ … Read more
ကျောင်းဆရာမတွေ ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုကြတာလဲ?
ကျောင်းဆရာမတွေ ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုကြတာလဲ? ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းဆရာမတွေထဲမှာ အပျိုကြီးဆရာမတွေ ပိုပိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ တွေ့လိုက်ရတဲ့အပျိုကြီးဆရာမတိုင်းဟာရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးပြည့်စုံ ကုံလုံတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ပညာတတ်တွေက သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေချန်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုမျိုးဆက်တွေနဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ထူထောင်ကြမှာလဲ။ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယုကတော အမြော်အမြင်ကြီးစွာပဲ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေ အိမ်ထောင်ပြုလို့ ကလေး ၂ယောက်မွေးရင် တစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူပေးသတဲ့။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ပညာတတ်မိဘတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်မွေးမြူနိုင်ဖို့ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီးသားသမီးကို တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စလွန်ရော ကျွံရော သုံးလေးယောက်ထက်ပိုမယူကြတော့ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ဘွဲ့ရပညာတတ်မိန်းမတွေကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းမအတော်များများဟာ အိမ်ထောင်မပြုကြတော့တာပါပဲ။ စာစောင်တစ်ခုထဲမှာ မိန်းမဦးရေက ယောက်ျားဦးရေထက်နှစ်ဆနီးပါး ပိုများလာခဲ့တယ် လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အရက်သောက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတဲ့လူငယ်တွေအများအပြားရှိလာခဲ့တယ်။ လူမသိ သူမသိသေနေတာတွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ တိုင်းပြည်မှာ အရက်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကို အလွယ်တကူပေါပေါများများသုံးစွဲခွင့်ရလာကြတာဟာ လူသားအရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင် နိုင်ငံသားကောင်းတွေလည်း … Read more